8 ways to hit refresh on employee mindset in 2021 (Part-2) ﻿
၃။ အချိန်ယူ၍ Remote Working ပြုလုပ်ရခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
2020 ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအလုပ်သမားများဟာ Home Office များမှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရပြီး home working habit များကိုလည်း ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ရုံးခန်းများအတွင်းမှ အိမ်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ရခြင်းသို့ လွန်စွာလျှင်လျှင်မြန်မြန်ပဲ ရွေ့လျားလာခဲ့ရခြင်းကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ remote working operation များကို ရရှိစေရန် မစွမ်းသာခဲ့ကြပါဘူး။ Remote working ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ရေရှည်ဆက်လက်၍ တည်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ယခုအချိန်ဟာ သင့်ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ ဒီလို working style ကနေ အကောင်းဆုံးသောအားသာချက်များကို ရယူနိုင်စေဖို့ ကူညီပေးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ခွင်အတွင်း လူသားများ၏ထိရောက်မှု၊ အကျိုးရှိပုံကိုတိုင်းတာသည့်ဘာသာရပ်ဖြစ်သော Ergonomics သည် ယခုအခါ ရေပန်းစားနေသော စကားလုံးတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ home office များတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက် သေးငယ်သောငွေကြေးပမာဏ အနည်းငယ်အား Allowance အနေဖြင့် သတ်မှတ်၍ပေးအပ်ပါ။ Work from home ပြုလုပ်ခြင်းဟုဆိုရာတွင် မိမိအိမ်ရှိ ဆက်တီခုံပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်နေရခြင်းအား ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ သင့်တော်လျှောက်ပတ်သော ထိုင်ခုံ၊ စားပွဲနဲ့ laptop stand တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်စေခြင်းဟာ သင့်ဝန်ထမ်းများရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရေရှည်မှာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်သလို သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ internal messaging platform ဟာ မည်မျှထိရောက်မှုရှိပါသလဲ? သင့်ရဲ့ team ဟာ task management စနစ်များကို အသုံးပြု၍ သင့်တော်စွာပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိနေပါရဲ့လား? သင့်ထံတွင် ဝန်ထမ်းအသစ်များကို အဝေးမှနေ၍ Onboarding အတွက် ညွှန်ကြားမှု၊ အသိပညာသင်ကြားပေးမှုများပြုလုပ်နိုင်မည့် HR software တစ်ခု ရှိနေပါရဲ့လား? နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အစပိုင်းဟာ အရာအားလုံးရှုပ်ထွေးခြင်းသိပ်မရှိသေးပဲ ရှင်းလင်းနေတဲ့အတွက် စနစ်အသစ်များချမှတ်ခြင်းနဲ့ ထိုအရာများကို ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး နှစ်သစ်ရဲ့အစပိုင်းတွင် hybrid team (work from home/ work from office ယှဉ်တွဲနေသော Team တစ်ခု) ဖြစ်လာနိုင်စေရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ Hybrid team များဟာ အချိန်တစ်ဝက်ခန့်ကို work from home ပြုလုပ်ကြပြီး၊ ကျန်အချိန်တစ်ဝက်ကိုတော့ ရုံးခန်းအတွင်းမှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပေးကြပြီး များသောအားဖြင့် ရုံးသို့လာရောက်ရသည့်အခါများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များနဲ့ brainstorming ပြုလုပ်ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြပါတယ်။
၄။ ကောင်းမွန်ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေးကို ဦးစားပေးပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးများကို ဦးစားပေးပါ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဝန်ထမ်းအများစုဟာ လွန်စွာရုန်းကန်ခဲ့ကြရတဲ့အတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လွန်းနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ဟာ ဒါတွေကိုပြန်လည်၍ တည်ဆောက်ကြရမယ့် အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Sense of wellness ရှိနေခြင်းဟာ positive mindset များဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက် အဓိကကျပြီး ဝန်ထမ်းများရဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအခြေအနေများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သွားသင့်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများအရ တစ်ကြိမ်သာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းများဟာ ဝန်ထမ်းများစုအတွက် အထောက်အကူမဖြစ်စေခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်များဟာတော့ health promotion strategy များကို ချမှတ်နေကြပြီပဲဖြစ်ကာ အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်များမှလည်း ထိုအရာကို တက်ကြွစွာအသိပေးကြေငြာချက်များ ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅။ စိတ်ဒါဏ်ရာများကို ဖယ်ရှားပါ။
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အစပိုင်းဟာ Employee Assistance Program (EAP) များကို စတင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ထိုသို့သော program မျိုး သင့်ထံတွင်ရှိနေပြီးသား မဟုတ်ပါက - EAP ဆိုသည်မှာ သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းများကို ပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက် အခမဲ့ရယူနိုင်ပြီး လျှို့ဝှက်ထားပေးမှုရှိသော အတိုင်အပင်ခံဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများနဲ့ regular informal check-in များပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာလည်း တစ်စုံတစ်ခုပြောင်းလဲမှုရှိနေပါကနှင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အကူအညီလိုအပ်နေသလားဆိုတာများကို သင့်အနေနဲ့ ချက်ခြင်းသိရှိ၊ ရိပ်မိနိုင်စေရန်အတွက် ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမြဲတမ်း၊ မကြာခဏ စကားစမည်ပြောဆိုပေးဖို့ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်အတွင်းတွင်သာ အလုပ်လုပ်ကြဖို့နဲ့ လိုအပ်ပါက အနားယူနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါ။
၆။ အလုပ်ခွင်အတွင်း လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းအား အားပေးကူညီပါ။
ကြားရက် အလုပ်ချိန်များအတွင်းတွင် ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နိုင်စေဖို့ အချိန်အချို့ ခွင့်ပြုပေးပြီး အတူတကွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ကြစေဖို့တိုက်တွန်းပေးပါ။ သင့်ရဲ့ work team ဟာ remote working ကို ပြုလုပ်နေရရင်လည်း Strava (သို့) Nike Running Club ကဲ့သို့သော fitness club များတွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့သားများအတွက် စာရင်းပေးသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ သင့် team အတွက် အောင်မြင်မှုများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ဆုကြေးငွေများ ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ Online ပေါ်မှသင်ကြားနိုင်မယ့် အားကစားနည်းတစ်မျိုးမျိုးကိုရှာဖွေနေရင်တော့ Virtual Yoga သင်တန်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
၇။ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအခြေအနေကောင်းမွန်မှုများကိုလည်း ဥပက္ခာမပြုထားပါနဲ့
ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေကောင်းမွန်မှုရှိလာဖို့ဟာ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်များထံမှ မျှော်လင့်သော အထောက်အပံ့များထဲကအဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုအရာကို မကြာခဏဆိုသလိုလည်း ဥပက္ခာပြုခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ team အတွက် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအကြံပေးတစ်ဦးနဲ့ တစ်နှစ်အတွင်း session အချို့သတ်မှတ်ကာဆွေးနွေးစေပြီး သူတို့အနေနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်စေဖို့ ကူညီပေးပါ။ လိုက်လျောမှုအသေးစားများဖြစ်တဲ့ ရုံးခန်းအတွင်း ကော်ဖီစက်ထားရှိပေးခြင်း တို့ဟာ ကော်ဖီဆိုင်မှဖျော်သောကော်ဖီကဲ့သို့သောအရသာကို အခမဲ့ရယူသောက်သုံးနိုင်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း အကုန်အကျသက်သာမှုရှိစေမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုပျော်ရွှင်လာစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ဘာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရလဲဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး အနာဂါတ်မှာ ဘာတွေရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာကို တွေးခေါ်စဉ်းစားပါ။
၂၀၂၀ ခုနှစ်ဟာ အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကို ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်မဟုတ်ခဲ့တာတော့ သေချာပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့ team ဟာ တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီး အနှောင့်အယှက်များကြားတွင် နစ်မြုပ်မသွားစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာလည်းကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းသို့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဝင်ရောက်ဖို့ စိတ်လောနေမှာဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကို ကာမိစေရန် ပြုလုပ်လိုမှာဖြစ်ပေမယ့် ယခုနှစ်ရဲ့အစပိုင်းမှာ အရမ်းကြီးပြင်းထန်စွာနဲ့စတင်မှုမပြုလုပ်မိဖို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ သတိပေးလိုပါတယ်။ ကပ်ရောဂါကာလဟာလည်း ပြီးဆုံးမှုမရှိသေးတဲ့အပြင် အခြားသောကိစ္စရပ်များဟာလည်းရှိနေသေးပြီး ကမ္ဘာကြီးဟာလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့အရေးဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေကြကာ ရှေ့ဆက်သွားဖို့အလုပ်များနေကြတဲ့အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်များဟာ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ ဆက်လက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီး သင့်ဝန်ထမ်းများဟာလည်း ဒီအရာကြောင့်ဖိစီးမှုများရှိနေဦးမယ်ဆိုတာကို သတိပြုရပါမယ်။
၂၀၂၀ ခုနစ်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို စာနာစိတ်ရှိစေဖို့၊ စိတ်ရှည်ဖို့နဲ့ ကြင်နာစွာဆက်ဆံတတ်ဖို့ကို သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရာက ထိုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာများထဲက တစ်ခုတည်းသော ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီး ဒါကို အနာဂါတ်ကာလများအထိ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူ ဆက်လက်ယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။